Power Bank နဲ့အားသွင်းတာ ဖုန်းဘက်ထရီကို ထိခိုက်စေနိုင်သလား?
17 Nov 2018 . 2:07 PM
ဘက်ထရီ စနစ်တကျအားသွင်းတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ Android နဲ့ iPhone အတွက် ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီတစ်ခါမှာ ဖြည့်စွက်အကြောင်းရာအနေနဲ့ ထပ်ပြီးတင်ပြချင်တာက Power Bank နဲ့ အားသွင်းတာ ဘက်ထရီိကို ထိခိုက်စေနိုင်သလား? ဘယ်လို အားနည်းချက်ရှိဦးမလဲဆိုတာ ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ ဖော်ပြသွားပါ့မယ်။
Battery to battery ဆိုတော့ D.C Current နဲ့ သွားပါတယ်
Power Bank ဟာလည်း Battery ပဲဆိုတော့ Electric Current က Direct Current (DC) ပေါ့။ ဒီတော့ သိထားသင့်တာက DC Current ဟာ ဟိုးအဝေးတလံကြီးကို လျှပ်စစ်မစီးနိုင်ဘူး၊ စီးမယ်ဆိုရင်တောင် Power Loss ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် Power Bank ဝယ်ရင် ကြိုးရှည်ရှည်ထည့်မပေးသလို များသောအားဖြင့် စမတ်ဖုန်းတွေထက် Voltage နဲ့ Ampere Rating ပိုများပါတယ်။
mAh ပိုများပြီး Voltage နဲ့ Ampere တောင့်တဲ့ Power Bank ကိုရွေးချယ်ပါ
ဒီတော့ DC Current အားနည်းချက် သိသွားပြီဆိုရင် ကိုယ့်ဖုန်း Battery ပမာဏ (ဥပမာ 3500 mAh) ထက်ပိုနည်းတဲ့ Power Bank မျိုး၊ ဒီလိုပဲ Voltage နဲ့ Ampere ကိုလည်း ဖုန်း Rating တိုင်းကြည့်ပြီး (ဥပမာ 5V/2A) ဆိုရင် အဲ့ထက်နိမ့်တဲ့ Power Bank မဝယ်မိပါစေနဲ့။
အရည်သွေးမပြည့်မီတဲ့ Power Bank ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ
ဒီလို Rating လည်းမပြည့်၊ mAh ကလည်း နည်း၊ Voltage ကလည်း မလုံလောက်ဘူးဆိုရင် ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ? Voltage ကစပြောရမယ်ဆိုရင် ဥပမာ ဖုန်းက 5V ၊ Power Bank က 4.2V ပဲရှိမယ်ဆိုရင် အားသွင်းမယ့်အစား ဖုန်းဆီကပြန်ယူပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပဲ သတ်မှတ် 5V ထက်ပိုများမယ်ဆိုရင် Power Circuit Board ပျက်စီးပါမယ် Overload ဖြစ်သွားလို့။
Quick Charge Power Bank by Huawei
ဒါနဲ့ဆက်စပ်ပြီး Ampere အကြောင်းထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဥပမာ ဖုန်းက 5V/2A ဆိုပါစို့ ဒါကို 1A ပဲရှိတယ်ဆိုရင် ဖုန်းအပူလွန်ကဲလာနိုင်ပြီး ထကွဲနိုင်ပါတယ်၊ ဒီလိုပဲ Ampere Rating များတဲ့ကောင်နဲ့ အားသွားသွင်းလို့ မြန်မြန်ပြည့်မယ် မထင်ပါနဲ့ ဖုန်းပဲ ပေါက်ကွဲသွားမှာပါ။ ဆိုတော့ ဖုန်းနဲ့ Power Bank ချင်း Level တူရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ရမယ်ပေါ့နော်။ နောက်ပြီး mAh ပိုများတဲ့ Power Bank ဝယ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ဦး၊ အပေါ်က အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ပါရဲ့ ဖုန်းဘက်ထရီထက် ပိုနည်းတဲ့ကောင်ဝယ်မိသွားရင် Power Loss ဖြစ်ဦးမှာမလို့ အားအပြည့်လည်း မသွင်းနိုင် ဖုန်းကိုလည်း ထိခိုက်ပါဦးမယ်။
Power Bank နဲ့အားသွင်းတာရဲ့ အကြီးမားဆုံး အားနည်းချက်
ဘက်ထရီကို Rapid Charging ၊ Continuous Charging ၊ Trickle Charging ၃ ခုလုံး ပြည့်အောင် အားသွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပါ။ ဆိုလိုတာ Healthy Battery ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဒီ ၃ ချက်လုံးနဲ့ ပြည့်စုံအောင် အားသွင်းပေးရပါမယ်။ Rapid နဲ့ Continuous Charging ဆိုတာက ဥပမာ 20% ကနေ 100% အထိ Non-stop သွင်းရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ 80% ရောက်လို့ ဖြုတ်ရင် Rapid Charging Pass ဖြစ်ပါတယ်၊ 100% အထိရောက်ဖို့ Continuous Charging နဲ့ဆက်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီး ရောက်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။
Continue to Trickle Charge
အခုဥပမာလို 100% Full ဖြစ်သွားရင် နောက်ဆုံး Trickle State ဆိုတာရှိပါသေးတယ်။ ဆိုလိုတာ အားအပြည့်ဖြစ်သွားရင်တောင် မဖြုတ်သေးဘဲ နောက်ထပ် ၅ မိနစ်လောက်ပစ်ထားလိုက်ပါ။ အဲ့ချိန်မှာ အားသွင်းရလို့ ဓာတ်မတိုင်က လွတ်ထွက်သွားတဲ့ Electron Hole တွေကို Small Current နဲ့ပြန်ဖြည့်မယ်၊ ဒီနည်းအားဖြင့် ဖုန်းဘက်ထရီ အားပိုခံမယ်၊ Efficiency ကောင်းမယ်၊ သက်တမ်းလည်း ကြာကြာအသုံးခံဦးမှာပါ။ ဒီအချက်တွေကို AC Current နဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုမယ့် Power Bank နဲ့ အားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ Trickle Charge ဆိုတာမရှိပါဘူး၊ အား 100% ပြည့်တာနဲ့ လျှပ်စစ်စီးတာ Circuit Board ကနေ ဖြတ်ချပစ်လိုက်မှာပါ။
အရည်သွေးပြည့်မီတဲ့ Power Bank မျိုးသာ ဝယ်ယူပါ
အခုလို အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေသိပြီးသွားရင် အရေးပေါ်အားသွင်းဖို့လိုလို့ Power Bank ဝယ်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ ဈေးကြီးကြီး ကောင်းတာကိုပဲ ဝယ်ယူပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲ? Power Bank မှာပါတဲ့ Printed Circuit Board (PCB) က အရေးကြီးဆုံးမလို့ပါ။ Voltage အတက်၊ ကျဖြစ်တာ၊ Safety Protection နဲ့ ပတ်သက်လို့ High Temperature ၊ Overcharge ၊ Over-current၊ Over-voltage ၊ Short-circuit ဖြစ်တာမျိုး ကာကွယ်ရတာမလို့ Quality ကောင်းတဲ့ Power Bank ကိုသာ ဝယ်ယူဖို့ အကြံပြုရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပါတယ်။
Power Bank နဲ့အားသှငျးတာ ဖုနျးဘကျထရီကို ထိခိုကျစနေိုငျသလား?
ဘကျထရီ စနဈတကအြားသှငျးတာနဲ့ ပတျသကျလို့ Android နဲ့ iPhone အတှကျ ဖျောပွခဲ့ပွီးပါပွီ။ ဒီတဈခါမှာ ဖွညျ့စှကျအကွောငျးရာအနနေဲ့ ထပျပွီးတငျပွခငျြတာက Power Bank နဲ့ အားသှငျးတာ ဘကျထရီကို ထိခိုကျစနေိုငျသလား? ဘယျလို အားနညျးခကျြရှိဦးမလဲဆိုတာ ဒီဆောငျးပါးလေးနဲ့ ဖျောပွသှားပါ့မယျ။
Battery to battery ဆိုတော့ D.C Current နဲ့ သှားပါတယျ
mAh ပိုမြားပွီး Voltage နဲ့ Ampere တောငျ့တဲ့ Power Bank ကိုရှေးခယျြပါ
ဒီတော့ DC Current အားနညျးခကျြ သိသှားပွီဆိုရငျ ကိုယျ့ဖုနျး Battery ပမာဏ (ဥပမာ 3500 mAh) ထကျပိုနညျးတဲ့ Power Bank မြိုး၊ ဒီလိုပဲ Voltage နဲ့ Ampere ကိုလညျး ဖုနျး Rating တိုငျးကွညျ့ပွီး (ဥပမာ 5V/2A) ဆိုရငျ အဲ့ထကျနိမျ့တဲ့ Power Bank မဝယျမိပါစနေဲ့။
အရညျသှေးမပွညျ့မီတဲ့ Power Bank ရဲ့ နောကျဆကျတှဲ ပွဿနာ
ဒီလို Rating လညျးမပွညျ့၊ mAh ကလညျး နညျး၊ Voltage ကလညျး မလုံလောကျဘူးဆိုရငျ ဘာဖွဈမယျထငျလဲ? Voltage ကစပွောရမယျဆိုရငျ ဥပမာ ဖုနျးက 5V ၊ Power Bank က 4.2V ပဲရှိမယျဆိုရငျ အားသှငျးမယျ့အစား ဖုနျးဆီကပွနျယူပါလိမျ့မယျ။ ဒီလိုပဲ သတျမှတျ 5V ထကျပိုမြားမယျဆိုရငျ Power Circuit Board ပကျြစီးပါမယျ Overload ဖွဈသှားလို့။
ဒါနဲ့ဆကျစပျပွီး Ampere အကွောငျးထပျပွောရမယျဆိုရငျ ဥပမာ ဖုနျးက 5V/2A ဆိုပါစို့ ဒါကို 1A ပဲရှိတယျဆိုရငျ ဖုနျးအပူလှနျကဲလာနိုငျပွီး ထကှဲနိုငျပါတယျ၊ ဒီလိုပဲ Ampere Rating မြားတဲ့ကောငျနဲ့ အားသှားသှငျးလို့ မွနျမွနျပွညျ့မယျ မထငျပါနဲ့ ဖုနျးပဲ ပေါကျကှဲသှားမှာပါ။ ဆိုတော့ ဖုနျးနဲ့ Power Bank ခငျြး Level တူရှိရမယျလို့ သတျမှတျရမယျပေါ့နျော။ နောကျပွီး mAh ပိုမြားတဲ့ Power Bank ဝယျဖို့ မမပေ့ါနဲ့ဦး၊ အပျေါက အခကျြတှနေဲ့ ကိုကျပါရဲ့ ဖုနျးဘကျထရီထကျ ပိုနညျးတဲ့ကောငျဝယျမိသှားရငျ Power Loss ဖွဈဦးမှာမလို့ အားအပွညျ့လညျး မသှငျးနိုငျ ဖုနျးကိုလညျး ထိခိုကျပါဦးမယျ။
Power Bank နဲ့အားသှငျးတာရဲ့ အကွီးမားဆုံး အားနညျးခကျြ
ဘကျထရီကို Rapid Charging ၊ Continuous Charging ၊ Trickle Charging ၃ ခုလုံး ပွညျ့အောငျ အားသှငျးနိုငျမယျဆိုရငျ အကောငျးဆုံးပါ။ ဆိုလိုတာ Healthy Battery ပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့ ဒီ ၃ ခကျြလုံးနဲ့ ပွညျ့စုံအောငျ အားသှငျးပေးရပါမယျ။ Rapid နဲ့ Continuous Charging ဆိုတာက ဥပမာ 20% ကနေ 100% အထိ Non-stop သှငျးရမယျလို့ ဆိုလိုတာပါ။ 80% ရောကျလို့ ဖွုတျရငျ Rapid Charging Pass ဖွဈပါတယျ၊ 100% အထိရောကျဖို့ Continuous Charging နဲ့ဆကျသှငျးရမှာဖွဈပွီး ရောကျနိုငျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပါ။
အခုဥပမာလို 100% Full ဖွဈသှားရငျ နောကျဆုံး Trickle State ဆိုတာရှိပါသေးတယျ။ ဆိုလိုတာ အားအပွညျ့ဖွဈသှားရငျတောငျ မဖွုတျသေးဘဲ နောကျထပျ ၅ မိနဈလောကျပဈထားလိုကျပါ။ အဲ့ခြိနျမှာ အားသှငျးရလို့ ဓာတျမတိုငျက လှတျထှကျသှားတဲ့ Electron Hole တှကေို Small Current နဲ့ပွနျဖွညျ့မယျ၊ ဒီနညျးအားဖွငျ့ ဖုနျးဘကျထရီ အားပိုခံမယျ၊ Efficiency ကောငျးမယျ၊ သကျတမျးလညျး ကွာကွာအသုံးခံဦးမှာပါ။ ဒီအခကျြတှကေို AC Current နဲ့ လုပျဆောငျနိုငျတယျဆိုမယျ့ Power Bank နဲ့ အားသှငျးမယျဆိုရငျတော့ Trickle Charge ဆိုတာမရှိပါဘူး၊ အား 100% ပွညျ့တာနဲ့ လြှပျစဈစီးတာ Circuit Board ကနေ ဖွတျခပြဈလိုကျမှာပါ။
အရညျသှေးပွညျ့မီတဲ့ Power Bank မြိုးသာ ဝယျယူပါ
အခုလို အရေးကွီးတဲ့ အခကျြတှသေိပွီးသှားရငျ အရေးပျေါအားသှငျးဖို့လိုလို့ Power Bank ဝယျရမယျဆိုရငျ ဘယျလောကျပဲ ဈေးကွီးကွီး ကောငျးတာကိုပဲ ဝယျယူပါလို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ။ ဘာလို့လဲ? Power Bank မှာပါတဲ့ Printed Circuit Board (PCB) က အရေးကွီးဆုံးမလို့ပါ။ Voltage အတကျ၊ ကဖြွဈတာ၊ Safety Protection နဲ့ ပတျသကျလို့ High Temperature ၊ Overcharge ၊ Over-current၊ Over-voltage ၊ Short-circuit ဖွဈတာမြိုး ကာကှယျရတာမလို့ Quality ကောငျးတဲ့ Power Bank ကိုသာ ဝယျယူဖို့ အကွံပွုရငျး နိဂုံးခြုပျလိုကျရပါတယျ။